Samuel Umtiti ayaa lagu soo waramayaa in uu u sheegi doono kooxda Barcelona in uuna wax xiiso ah u qabin in ay heshiis la galaan xidigan oo si xor ah uga tagaya kooxda xagaagan.
27 jirkaan ayaa kaliya 16 kulan u saftay kooxda Ronald Koeman xilli ciyaareedkii hore, waxaana si xoogan loola xiriirinayay inuu ka tagayo Camp Nou bilihii la soo dhaafay.
Warbixin dhawaan soo baxday ayaa sheegtay in Barcelona ay u soo bandhigtay inay ka fasaxdo Umtiti qandaraaskiisa xagaagan, iyadoo kooxda reer Catalan ay si aad ah isugu dayayaan inay yareeyaan mushaharkooda.
Wararka Maanta : Liverpool Iyo Arsenal Oo Ku Dagaalamaya Saxiixa Ciyaaryahanka Kooxda Lille...
Daafaca dhexe wuxuu xaq u lahaan doonaa xirmo magdhow ah, madaama qandaraaskiisa weli ay u harsan tahay labo sano laakiin sida laga soo xigtay Marca , ciyaaryahanka reer France ayaan xiiseyneynin inuu ku boxo qaab bilaash ah.
Warbixinta ayaa intaas ku dareysa in Umtiti uu u furan yahay inuu dhaqaaqo xagaagan laakiin weli wuxuu rajeynayaa in la siiyo fursad uu ku muujiyo inuu u qalmo qorshaha Koeman inta lagu jiro isku diyaarinta xilli ciyaareedka.
Xiddiga reer France, oo lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Premier League, ayaa ka soo muuqday Barcelona 132 jeer tan iyo markii uu kooxda kaga soo biiray Lyon bishii July 2016.